WASHINGTON — Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in baaritaan madaxbannaan oo hufan lagu sameeyo iskudhacii uu dhiiga badani ku daatay ee Jimcihi shalay ka dhacay xadka Israel iyo Gaza.
Isku-dhacyadaasi ayaa waxaa ay ciidamada Israel ku dileen 17 ruux oo Falastiiniyiin ah, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 1,400 oo ruux. Dadkaasi dhaawacmay ayaa 750 ruux oo ka mid ahi la sheegay in lagu dhaawacay rasaas toos ah.
Milatariga Israel waxay sheegeen in ay kala eriyeen dad sameeynayay mid ka mid ah dibadbixi ugu weynaa ee ka dhaca xuduuda Gaza muddo sannada ah.
Caalamka 06.12.2017. 16:47
Shacabka Falastiin ayaa billaabay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan go'aanka Trump ee...